Nepal Mamila | कांग्रेस महाधिवेशन: यी हुन् बागमती प्रदेशका जिल्लामा सभापतिका आकांक्षी - Nepal Mamila कांग्रेस महाधिवेशन: यी हुन् बागमती प्रदेशका जिल्लामा सभापतिका आकांक्षी - Nepal Mamila
कांग्रेस महाधिवेशन: यी हुन् बागमती प्रदेशका जिल्लामा सभापतिका आकांक्षी
काठमाडाैं- बागमती प्रदेशका जिल्लामा सभापतिको प्रत्यासी बनाउन कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षलाई गाह्रो हुने देखिएको छ। आकांक्षीको संख्या बढी हुँदा संस्थापनइतरलाई नाम टुंग्याउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो।
बढी प्रतिनिधि छानिने चितवनमा संस्थापनइतरलाई प्रत्यासी चयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई जिल्ला सभापति अघि सार्न तुलनात्मक रुपमा केही सहज हुने देखिएको छ। संस्थापनइतरभित्रका पनि समूहले एकल उम्मेदवार चयन गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
बागमतीमा धादिङ, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र चितवन जिल्ला रहेका छन्। संघीय सरकारको केन्द्रसमेत रहेको यस प्रदेशबाट कांग्रेसका सर्वाधिक महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने छन्।
साउन २३ र २६ गरी जिल्ला अधिवेशन हुने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। त्यसअनुसार सभापतिको आकांक्षीहरुले मतदाता आफूतिर तान्न प्रयास सुरु गरेका छन्। साथै, जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्नका लागि केन्द्रमा लबिइङ पनि सुरु गरिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला सभापतिका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काठमाडौंमा संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा), संस्थापनइतरका नेता प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य भीमसेनदास प्रधान समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा प्रकाशमान सिंह समूह बलियो छ। उनीपक्षीय कृष्ण सबुज बानियाँ सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। बानियाँ दोस्रोपटक सभापति बन्नका लागि अघि सरेका छन्।
देउवापक्षबाट उपेन्द्र कार्की र राजु श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ। कार्की काठमाडौं-२ र श्रेष्ठ काठमाडौं-‍४ का क्षेत्रीय सभापति हुन्। श्रेष्ठले देउवापक्षको आधिकारिक उम्मेदवार आफू भएको भन्दै प्रचार थालिसकेका छन्।
काठमाडौंमा जिल्ला सभापति बनाउन नेता भीमसेनदास प्रधानको चासो हुने गर्दछ। उनले आफ्नो समूह नै खडा गरेका छन्। प्रधानपक्षबाट गौरी दवाडी र हरिहर अधिकारीको नाम चर्चामा आएको छ। भीमसेनदास जिल्ला सभापति हुँदा दवाडी उपसभापति रहेका थिए। महासमिति सदस्य अधिकारी गत निर्वाचनमा टोखा नगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी थिए।
२०७२ सालको जिल्ला अधिवेशनमा देउवापक्षले सबुज बानियाँलाई सहयोग गरेका थिए। विगतका दुई अधिवेशनमा देउवा समूहको छुट्टै उम्मेदवार थिएनन्। प्रकाशमान सिंह र भीमसेनदास समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रने गरेको थियो। यसपटक वडा तहदेखि नै देउवापक्षले तयारी गरेको छ। देउवा समूह अघि बढेपछि यसपटक त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ।
प्रकाशमान सिंहले आफू पक्षीय संरचना तल्लो तहसम्म बनाएका छन्। सिंह बलियो हुनुको लाभ सभापतिका प्रत्यासी बानियाँले उठाउने छन्। त्रिपक्षीय भिडन्त हुने हुँदा दुई पक्ष नमिली निर्वाचनमा जित निकाल्न कठिन पनि देखिन्छ। संस्थापनइतरकै नेता भए पनि भीमसेनदासले अर्का नेता प्रकाशमान सिंह पक्षलाई भने स्वीर्कान सक्दैनन्।
भीमसेनदासले संसदीय दलको नेतामा सिंहलाई मत नदिएर देउवालाई दिएका थिए।
यस हिसाबले पनि माथिल्लो तहका नेताले जिल्ला अधिवेशन प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। अन्तिम चरणमा देउवा पक्ष र प्रधान समूहको साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसबेला बानियाँले दुई समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
चितवनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्ष बलियो छ। बलियो पक्षलाई नै जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी चयन गर्न हम्मे-हम्मे पर्ने देखिएको छ। पौडेलपक्षबाट सभापतिमा दाबी गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी छन्। अर्कोतर्फ देउवापक्षबाट सभापतिका उम्मेदवार एकल छन्।
चितवनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले डा. सूर्यकान्त घिमिरेलाई अघि सार्न खोजेका छन्। घिमिरेले गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उठ्न प्राध्यापकबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनी उठ्न पाएनन्। सभापति देउवापक्षबाट प्रदेश सभा सदस्य मिलनबाबु श्रेष्ठ सभापतिको प्रत्यासी बन्ने भएका छन्। संस्थापनइतरबाट क्षेत्र नम्बर १ का महासमिति सदस्य राजेन्द्र बुर्लाकोटी, क्षेत्र नम्बर २ का राजेश्वर खनाल र क्षेत्र नम्बर ३ का विजय भुषाल सभापतिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी गरेका छन्।
सभापतिमा आकांक्षा राख्ने अन्यमा हालका उपसभापति कैलाश कोइराला र सचिव उत्तम जोशी छन्। साथै, जगन्नाथ पौडेल सभापति बन्ने लाइनमा छन्। पूर्वसभापति टेकप्रसाद गुरुङ पनि आकांक्षी छन्। उनीहरु सबै संस्थापनइतरका जिल्ला नेताहरु हुन्।
मकवानपुरमा संस्थापन इतरले सभापतिको उम्मेदवार पाउन नै सकेको छैन। रामचन्द्र अर्याल ‘माइकल’ संस्थापनइतर पक्षको रोजाइमा छन्। पार्टी फुट्दा प्रजातान्त्रिकतर्फ लागेका उनी अहिले पौडेल खेमामा छन्। तर, जित निकाल्न उनलाई कठिन छ।
मकवानपुरमा संस्थापन समूह बलियो छ। प्रदेश सभापति पाएनन् भने देउवानिकट इन्द्र बानियाँ दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। उनी प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेतासमेत हुन्। उनी प्रदेश समितिमा जाने अवस्था बने सोही समूहबाट आनन्द पराजुलीले जित निकाल्न सक्छन्। जिल्लाको राजनीतिमा संस्थापन पक्षमा देखिएका पराजुली केन्द्रमा शेखर कोइरालानिकट रहेको बताइन्छ।
जिल्ला सभापति मदन अमात्य र तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष उदयशमसेर राणा संस्थापन भए पनि उनीहरुबीच उम्मेदवार चयनमा मतैक्यता हुन नसक्ने बताइएको छ।
संस्थापनबाट रामकृष्ण चित्रकार र मीनकृष्ण महर्जनको नाम अग्रपङ्तिमा आएको छ। अघिल्लोपटक हारेका जितेन्द्र श्रेष्ठलाई फेरि उठाउने संस्थापनइतरको तयारी छ। उनी नभए प्रेमकृष्ण महर्जनलाई अघि सार्ने बताइएको छ। महासमिति सदस्य मथुरा घिमिरेले पनि जिल्ला सभापतिको आकांक्षा देखाएका छन्।
दीपेन्द्र मलेगु, प्रकाशरञ्जन जोशी, गजेन्द्र महर्जन र रविन शर्मा पनि सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन्।
भक्तपुरमा संस्थापनइतर धेरै कमजोर छ। संस्थापनइतरबाट विनोद कायस्थ, गणेशमान चक्रधर, अष्ट कवे र बाबुराजा जोशीमध्ये एकले उम्मेदवारी दिने बताइएको छ। गत अधिवेशनमा दुर्लभ थापासँग कवे पराजित भएका थिए। देउवा क्याम्पबाट दुर्लभ थापा दोहोरिने बताइएको छ।
काभ्रेको कांग्रेस राजनीतिमा मधु आचार्य र शिव हुमागाईंले प्रभाव पार्दछन्। दुवै समूह संस्थापनइतर भए पनि जिल्लामा एक हुन भने सक्दैनन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट देखिने हुमागाईं पदीय भागवण्डामा देउवासँग पनि जोडिन पुग्दछन्।
वरिष्ठ नेता पौडेलनिकट आचार्य प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार हुने अवसर पाए जिल्लामा नदोहोरिने पक्षमा छन्। देउवा पक्षबाट पूर्वसांसद तीर्थ लामालाई अघि सार्ने तयारी गरिएको छ। देउवा र हुमागाईं पक्षको गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
संस्थापनइरबाट आचार्य नउठेको अवस्थामा उपसभापति अच्युत पौडेललाई अघि सार्ने बताइएको छ। साथै, विगतमा देउवापक्षमा रहेर संस्थापनइतरमा लागेका जिल्ला नेता महेश खरेललाई पौडेल प्यानलबाट उम्मेदवार बनाउने चर्चा पनि छ। उनको विकल्पमा कञ्चन वादेलाई अघि सारिने भएको छ।
उपाध्यक्ष अच्युत पौडेल, क्षेत्रीय सभापति रमेश हुमागाईं, जिल्ला सचिव दिनेश लामा, जिल्ला नेता कुमार लामिछाने पनि सभापतिको आकांक्षी छन्। सिटौला पक्षमा देखिएका जिल्ला सचिव लामाले सभापतिको दाबी गरेका छन्।
संस्थापनइतरबाट रामनाथ अधिकारी, रमेश धमला र बासु तिमल्सिना रामचन्द्र प्यानलबाट जिल्ला सभापति बन्ने लाइनमा छन्। प्रदेश समितिमा आउने अवस्था रहे अधिकारीले दाबी छोड्ने बताइएको छ। अधिकारी यसअघि दुई कार्यकाल जिल्ला सभापति बनिसकेका छन्। धमला जिल्ला सभापतिमा दोहोरिन चाहेका छन्।
देउवापक्षबाट भीम ढुङ्गाना प्रत्यासी हुन्। उनी गत अधिवेशनमा धमलासँग पराजित भएका थिए। ढुङ्गाना नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख हुन्। देउवा समूहबाट दिलमान पाख्रिन पनि आकांक्षी हुन्। तर, ढुङ्गाना उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ।
संस्थापनइतरबाट केसी र डा रामशरण महत पक्ष एक स्थानमा उभिए नुवाकोटमा उक्त समूहले जित निकाल्नसक्ने आकलन गरिएको छ। केसी परिवारकै सदस्य डा. केदारनरसिंह केसी सभापति बन्ने लाइनमा छन्। अर्कोतर्फ रामशरण महतका भतिज रमेश महत पनि चुनावी मैदानमा देखिने पक्षमा छन्। सोही समूहबाट हालका सचिव सुरेन्द्र अधिकारी पनि आकांक्षी छन्।
संस्थापनपक्षबाट पूर्वसभापति ध्रुव अधिकारीको नाम चर्चामा छ। जगदिश्वर नरसिंह केसीले चार कार्यकाल सभापति बनेका छन्। त्यसअघि अधिकारी सभापति थिए। जिल्ला नेताद्वय शोभराज शाक्य र सन्तमान तामाङ पनि सभापतिको दौडमा छन्।
उज्जवल बराल सभापतिमा दोहोर्‍याउन खोजेका छन्। तर, उनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छैनन्। संस्थापनइतरले उनलाई नै दोहोर्‍यान खोजेको छ। बरालको विकल्पमा पूर्वसचिव उपेन्द्र पोखरेललाई अघि सारिने भएको छ।
देउवापक्षबाट प्रेमचन्द्र दाहालको नाम चर्चामा छ। सोही समूहबाट नरेन्द्रजंग थापाले पनि सभापतिको दाबी गरेका छन्। दाहाल र थापा दुवै जना संघीय निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए। जिल्लामा सभापतिको दाबी गर्ने नाममा माणिक ढकालको नाम पनि आएको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा संस्थापनपक्ष गत अधिवेशनमा पराजित हरिशरण श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी बनाउने बताइएको छ। श्रेष्ठको साथै सोही समूहबाट बालकृष्ण बस्नेत र प्रेमध्वज लामाको नाम पनि चर्चामा छ।
संस्थापन इतरबाट विकास लामा दोहोरिन पनि सक्छन्। उनी पुनः प्रत्यासी नभए पौडेल खेमाले भूपू सभापति भोपेन्द्र थापा वा वंशलाल तामाङलाई उम्मेदवार बनाउन खोजेको छ। सोही पक्षबाट आइतमान तामाङ र पासाङ दोङले पनि सभापतिको दाबी गरेका छन्।
यस्तै नेता कृष्ण सिटौला खेमाका नेविसंघ महामन्त्री वलदेव तिमल्सिनाले सभापतिको दाबी गरेका छन्।
पूर्वसभापति लामा कार्पु र अहिलेका सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङ आकांक्षी छन्। सहमतिमा जिल्ला नेतृत्व चयन हुने तामाङले जानकारी गराएका छन्। दुवै देउवापक्षका जिल्ला नेता हुन्। दुधर्के लामा र जनक जीवन उपाध्याय पनि सभापतिका आकांक्षी हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यको समर्थन रहने उम्मेदवारले जित निकाल्न सक्छन्।
संस्थापनइतरले लवश्री न्यौपानेलाई दोहोर्‍याउन खोजेको छ। न्यौपानेको विकल्पमा अर्जुन केसी वा कृष्णबहादुर महतोलाई अघि सार्न खोजिएको छ। देउवापक्षका प्रत्यासी उम्मेदवार कान्छाराम तामाङ हुन्। देउवाले तामाङलाई निवासमा बोलाएर जिल्ला सभापतिमा लड्न निर्देशन दिएका थिए।
संस्थापनबाट उम्मेदवार चयन गर्न जिपछिरिङ लामाको हात रहन्छ। संस्थापनबाट रुद्र खड्कालाई नै दोहोर्‍याउने तयारी भएको बताइएको छ। संस्थापनइतरबाट वर्मा लामाको नाम अघि ल्याइएको छ। लामाको नाममा संस्थापनइतरमा सहमति भइसकेको बताइएको छ।